Yakasarudzika Yakareba hex mabhaudhi hex shaft mabhaudhi - China Tsika Yakareba hex mabhaudhi hex shaft bhaudhi Mutengesi, Fekitori -Shanghai T&Y Hardware Maindasitiri.
Tsika Yakareba hex mabhaudhi hex shaft bolts
Akakosha mabhaudhi hex shaft mhando dzese dzakakosha mabhaudhi
Mimwe mienzaniso mapikicha.
Ndapota taura nesu kuti uwane mamwe mashoko mapikicha.
Aluminium Door Flush Bolt Door Foot Bolt Mhando dzeMusuwo Bolts
Ndokumbirawo uzive Saizi, huwandu, Chinyorwa kana Giredhi, pamusoro, Kana iri yakakosha uye Isiri-yakajairwa zvigadzirwa, ndapota tipei iyo Drawing kana Mifananidzo kana Samples kwatiri
6: Zvinyorwa: Kirasi 4.8 / 8.8 / 10.9 paDin, Kana Gr2 / 5/8 pa IFI.
Tine zana ekugadzira michina, kusanganisira inowaniswa otomatiki akawanda-nhanho inotonhora ndokugadzira michina, inopisa yekugadzira michina, yakakwira-chaiyo CNC lathes, uye mamwe marudzi emachina anoshandiswa ekugaya, kuronga, kukuya uye kuchera. Iyo kambani zvakare yakagadzirirwa neiyo yakazara seti yetambo yekugadzirisa michina.
Isu takagadzira yakasanganiswa maitiro kuyerera pamusoro pekuyedza mbishi zvinhu, zvinosanganisira kemikari Chikamu Chekuongorora, mechina chivakwa, uye chiratidzo uye zvichingodaro. Kuvimbisa chigadzirwa chemhando
Kuti uve nechokwadi chemhando yepamusoro uye nemhando yezvigadzirwa, kambani yakashongedzerwa nehunyanzvi hwekuyedza michina: mhando dzekuyera maturusi, kuomesa muchina, X-RAY Ukobvu Tester, munyu pfapfaidzo muchina, Tension muchina, zvichingodaro. kuve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvese zvinozoongororwa zvizere zvichienderana nemhando dzakasiyana dzekushanda uye zvigadzirwa zvekambani zvine mhando yepamusoro pasirese.
- 10 makore ezviitiko mu Fastener Indasitiri
- Bolts: Hex bolts, Yekutakura Bolts, Hex lag sikuru, huni screw
Ndokumbirawo ubaye iyi link iripazasi, uye titumire isu kubvunza.
inokupa iwe mutengo uri nani nemhando yepamusoro masevhisi
Stainless Simbi Din 975 Din 976 yakamonerwa tsvimbo
Stainless Simbi Chikamu chemusoro mabhaudhi / Yakakosha misoro mabhaudhi / Square yakagadzika sikuruu
Hex bolts nekapu poindi / Yakakosha hex mabhaudhi / Tsika hex musoro mabhaudhi
Brass Mukadzi Mukadzi Thread Hose Barb / Brass Connector Coupler Joint / Thread Hose Barb kukodzera